Amandla omoya eZaragoza | Ukuvuselelwa Okuhlaza
Amandla omoya eZaragoza
Amandla omoya angenye yezinto ezisetshenziswa kakhulu emhlabeni jikelele. Iyakwazi ukukhiqiza inani elikhulu lamandla isebenzisa umoya njengesisekelo sayo. ESpain kabasebenzisi wonke amandla avuselelekayo okungenzeka abe nawo, ikakhulukazi ngamandla omoya, kepha bathuthuka kahle. EZaragoza, kunepulazi lomoya i-Iberdrola elibizwa ngeLa Plana III. Leli pulazi lomoya lineminyaka engaphezu kwengu-20 lisebenza futhi lilo elidala kunawo wonke eSpain.
Kule ndatshana sichaza konke mayelana amandla omoya eZaragoza.
1 Ipulazi lomoya eLa Muela
2 IZaragoza yakha amapulazi omoya amaningi
3 I-Aragon, amandla okuzimela wesithathu waseSpain
4 Ukwenza ngcono okuvuselelekayo
Ipulazi lomoya eLa Muela
Ipulazi lomoya linamandla amamegawathi angama-21 futhi lisedolobheni laseLa Muela, eZaragoza. Lawa megawathi angamandla angama-21 anikezwa ngokuphelele imishini yomoya. Kunjalo ukubaluleka kwaleli pulazi lomoya ukuthi ILa Muela ibhekwa njengedolobha eliphila ngomoya. Akulona ihaba elinikezwe ukuthi cishe i-98% yemithombo yamandla esetshenzisiwe ivela epulazini lomoya.
La ma-megawatts angama-21 ahumusha abe ngamandla acishe abe yi-950 GWh, esebenza ukuhlinzeka inani labantu abangama-726.000 ngonyaka. Okungaphezulu noma okuncane lokhu yisibalo sabantu uZaragoza anaso, ngakho-ke kungashiwo ukuthi baphila ngenxa yomoya.
Amandla omoya athuthuka ngokugxuma kakhulu ngenxa yobuchwepheshe obuthuthukisiwe nokuncintisana ezimakethe zamandla. Le mininingwane emihle yokukhiqizwa kwamandla omoya eZaragoza ingumphumela wokusetshenziswa kwezinhlelo ezahlukahlukene ezilungiselelwe ezibhekele ukuthuthukisa ukusebenza kahle kwamandla ekusetshenzisweni kukagesi. Sekuyiminyaka eminingi isebenza futhi unyaka ngamunye ithuthukisa okuningi. U-Iberdrola uphethe ukuvuselela imishini nokuyithuthukisa ukuze ithole imiphumela engcono.
U-Iberdrola ubambe iqhaza elikhulu ekuphathweni kokwenza ngcono ukuphathwa kwensizakalo enikezwa izinkampani ezihlinzeka ngabathengi. Ukugcinwa kwemisebenzi yepulazi lomoya bekuthuthuka ngenxa yokusebenza kangcono kwabasebenzi. Konke lokhu kuholele ekwenzeni ngcono ukusebenza kwepulazi lomoya kanye nokutholakala kwezinsiza zokuphakelwa kwamandla.
IZaragoza yakha amapulazi omoya amaningi
Ngokunikezwa impumelelo yamapulazi omoya eZaragoza, ngenxa yesimo sendawo kanye nombuso womoya okuhlinzekayo isimo sezulu eZaragoza, konke lokhu kufanele kukhuthazwe ukwenza ngcono ukukhiqizwa kwamandla. NgoJuni 2018, kwakhiwa amanye amapulazi omoya ayi-9 angaphansi kwephrojekthi yeGoya. Phakathi kwamapulazi omoya ayi-9 kunama-megavaries angama-300, okwenza kube ngumsebenzi omuhle kakhulu wokuhlinzeka ngogesi.
Izindawo lapho kuzokwakhiwa khona la mapulazi omoya kukhona ICampo de Belchite, iCampo de Daroca neCampo de Cariñena. Imisebenzi kulindeleke ukuthi iqedwe ekupheleni kwalo nyaka.
Akumele sibheke kuphela kahle ekwakhiweni kwala mapulazi omoya njengomthombo omuhle wamandla avuselelekayo, kepha futhi nemiphumela emihle ezoba nayo emvelweni. Ngenxa yokwakhiwa kwawo wonke la mapulazi omoya, kuzokwazi ukunciphisa ukukhishwa kwe-CO2 ngonyaka ngamathani ayi-314.000. Lokhu kunezinzuzo eziningi maqondana nokuhlungwa kwamagesi abamba ukushisa kanye nokushisa emkhathini. I-CO2 encane ingakhishwa emkhathini, lapho sizosebenza kahle khona sizolwa nokushisa komhlaba kanye nemiphumela yokuguquka kwesimo sezulu.
Ngaphezu kwalokho, futhi inezinzuzo zomphakathi, kusukela kuzokhiqiza imisebenzi engaphezu kwengu-1.000 50 ngesikhathi sesigaba sokwakhiwa kwepaki kanye nemisebenzi engama-XNUMX ehlala njalo ngoba lapho ipaki iphakeme futhi isebenza. Laba bantu bazophatha ukunakekelwa futhi baqinisekise ukuthi ipulazi lomoya ligcwalisa isithembiso salo: ukukhiqizwa kwama-megawatts angama-300.
I-Aragon, amandla okuzimela wesithathu waseSpain
Futhi amandla avuselelekayo enza kube nokwenzeka ukuba ne- ukuzisebenzisela wena amandla ngaphandle kokuya ngegridi kagesi yaseSpain esebenzisa izinto zokubasa ngakho. Amandla omoya avela kuwo wonke la mapulazi omoya amasha nalelo eselivele laziwa eLa Muela, azobeka i-Aragon endaweni yesithathu ekuzibuseni kwamandla, kuphela kudlulwe nguCastilla y León noGalicia.
Ukutshalwa kwemali kokwakhiwa kwala mapulazi omoya kungama-multimillion dollar futhi kunezinkampani eziningi kulo mkhakha ezizibophezele kuwo. Phakathi kwazo kugqama u-Forestalia noGrupo Jorge. Ngala mapulazi omoya inani lamandla elizokhiqizwa lingaphindwa kathathu.
Ezindalini zamandla ombuso ezedlule, iZaragoza ibisezingeni eliphezulu ngokutholakala kwesisetshenziswa samahhala, umoya. Imininingwane eqoqwe ngoJanuwari 31 wonyaka owedlule yathi i-Aragon kwakuyindlela yesihlanu yokuzimela kwesizukulwane somoya kulo lonke elaseSpain. Ngaleso sikhathi yayinamamegawathi ayi-1.829 ngaphandle kokuthuthukiswa kwamapaki amasha. Lapho amapulazi amasha omoya eseqediwe futhi aqala ukusebenza izoba namandla ka-5.917 megawatts, okuzokwenza ikhuphuke emandleni ayo okuzimela kwamandla.
Kodwa-ke, noma ngabe ngokwakhiwa kwala mapulazi amasha omoya azokwazi ukudlula umholi kulo mandla avuselelekayo eSpain, uCastilla y León. Lo mphakathi ozimele unamandla ka-8.027 MW, okuningi kakhulu kunalokho okufiswa yi-Aragon. Endaweni yesibili sineGalicia, engeke ibe yindawo yesibili isikhathi eside, ngenxa yokuthi inamandla angama-6.039 MW. Lokhu kungaphezudlwana nje kwenani elizotholwa yi-Aragon futhi asazi noma lizothuthukisa ukutholakala namandla ezobuchwepheshe kamuva ukukhiqiza amandla athe xaxa.
Ukwenza ngcono okuvuselelekayo
Uma yonke imishini yomoya okulindeleke ukuthi yakhiwe iphumelele futhi amaphaneli we-photovoltaic akhona nalabo abalinde ukwakhiwa ekugcineni basebenza, I-Aragon izokwazi ukukhula ifike kuma-58% emandleni avuselelekayo. Kungumkhiqizo ongokomlando ongathuthukisa isimo samandla emadolobheni aso, ngaphezu kokunakekela imvelo. Ukutshalwa kwemali kwayo yonke le mikhakha yamandla avuselelekayo kudlula ama-euro ayizigidi ezingama-7.000.
Njengoba ukwazi ukubona, amandla avuselelekayo kancane kancane angena emkhakheni wezamandla waseSpain kanti iZaragoza iyaqhubeka nokukhuphuka. Ngiyethemba ukuthi amanye amadolobha azolandela isibonelo futhi athuthuke kakhulu kulo mkhakha.
Indlela ephelele ye-athikili: Ukuvuselelwa Okuhlaza » Amandla avuselelekayo » Amandla omoya » Amandla omoya eZaragoza
Lapho isikhathi siguqulwa